Google AdWords किवर्ड उपकरण | नि: शुल्क कीवर्ड योजनाकार | Clever विज्ञापनहरू
मान्छे को टन अहिले गुगल खोजीहरू गर्दै
तिनीहरूले तपाईंलाई फेला पार्न सक्छन्?
सही किवर्ड फेला
सबै भन्दा राम्रो किवर्ड पाउन टाइप सुरु गर्नुहोस्। नयाँ रुझान पत्ता:
तपाईंको परिणामहरू फिल्टर।
सही अवसर पत्ता लगाउनुहोस्।
हाम्रो शक्तिशाली फिल्टरिङ र योजना उपकरण तपाईं intuitively र चाँडै तपाईं वास्तवमा रुचि राख्नु हुन्छ कीवर्ड अवसर पत्ता लगाउन अनुमति दिन्छ। हाम्रो सबै-मा-एक शब्द योजनाकार तपाईँले पूर्ण खोजशब्द अनुसन्धान गर्न कुनै पनि अन्य उपकरण आवश्यक छैन।
खोजशब्द सूची बनाउन र आफ्नो शक्ति को अन्तिम ड्रप आउट प्राप्त।
सूचीमा तपाईंको कीवर्डहरू बचत र समूह गर्नुहोस् ताकि तपाईं तिनीहरूलाई कुनै पनि समय Clever Ads कुञ्जी योजनाकारमा प्रबन्ध गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं सुरूबाट नयाँ सूचीहरू सिर्जना गर्न सक्षम हुनुहुनेछ, अपडेट गर्नुहोस्, र तिनीहरूलाई मर्ज गर्नुहोस् वा कीवर्ड एक सूचीबाट अर्कोमा हस्तान्तरण गर्नुहोस्।
आफ्नो व्यवसाय को लागि सही किवर्ड खोजी
नयाँ किवर्ड हजारौं र पत्ता लगाउनुहोस् फिल्टर गरी सही परिणाम प्राप्त त्यसैले तपाईं मात्र साँच्चै रुचि कि किवर्ड केन्द्रित छ। तपाईं नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ।
नयाँ सूची सिर्जना गर्न वा तपाईंको अवस्थित सूची पूरा
तपाईं आफ्नो किवर्ड चयन गरेपछि, तपाईँले तिनीहरूलाई लागि नयाँ सूची सिर्जना गर्न सक्षम हुन वा तिनीहरूलाई अवस्थित एक समावेश गर्नेछौं। तिनीहरूलाई व्यवस्थापन र तपाईं चाहनुहुन्छ रूपमा खेल्न - एक्सेल बारेमा बिर्सन्छन्।
तपाईंको कुञ्जी शब्दहरू सिधा तपाईंको Google Ads अभियानमा अपलोड गर्नुहोस्
एकै क्लिकमा तपाईको सूचीबाट तपाईको Google Ads अभियानमा कुञ्जी शब्दहरू अपलोड गर्नुहोस्। एकै नजरमा तपाइँको अभियानहरूमा हराइरहेका कुञ्जी शब्दहरू पत्ता लगाउनुहोस् र तपाइँको प्रदर्शनलाई बढावा दिनुहोस्।
नयाँ किवर्ड कहीं पत्ता
Clever Ads कुञ्जी शव्द योजनाकार विशेष रूपमा कुनै पनि उपकरणबाट अधिकतम उर्जा दिन डिजाइन गरिएको हो। त्यसैले तपाईं यसलाई कुनै पनि समय र कहिँ पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
हाम्रो क्रोम विस्तार संग बिट प्रतियोगिहरु
ब्राउज प्रतियोगी साइटहरू र पत्ता लगाउन किवर्ड तिनीहरूलाई मदत जो यातायात आकर्षित।
क्रोम विस्तार डाउनलोड
हाम्रो सबै भन्दा राम्रो सुविधा? हाम्रो प्रयोगकर्ताहरू।
Clever Ads , हामीलाई हाम्रो प्रयोगकर्ताहरू र ग्राहकहरू भन्दा बढि केही फरक पर्दैन। उनीहरू के भनिरहेछन् हेर्नुहोस्:
“म विशेष गरी तिनीहरू विकसित Chrome विस्तार, म यस्तै वेबसाइट विश्लेषण र तिनीहरूले प्रयोग कीवर्डहरू देखि विचार प्राप्त गर्न सक्छन् यसरी जस्तै। म पनि म अझ राम्रो र जानकारी निर्णय गर्न सक्छन् त्यसैले म निःशुल्क कीवर्डहरू सम्बन्धित सबै जानकारी डाउनलोड गर्न सक्छन् भनेर आनन्द।”.
“मैले गुगल कीवर्ड प्लानरबाट प्राप्त गर्ने कुञ्जी शव्दहरू प्रायः सामान्य नै हुन्छन् र धेरै वर्णनात्मक हुँदैनन्। त्यसैले म Clever Ads कुञ्जीशब्द अनुसन्धान उपकरणलाई रुचाउँछु। यसले मलाई पूर्ण परिणाम दिन्छ किनकि उनीहरूले धेरै स्रोतबाट डाटा प्राप्त गर्दछन्, र साथै मलाई Google Ads खाता वा कहिँ पनि दर्ता गर्न आवश्यक पर्दैन।”
“चाँडै नै मैले नयाँ कीवर्डहरूको गुच्छा समावेश गरेर मैले Clever Ads Google Ads CTR मा वृद्धि देख्न सक्दछु। अब जब मैले कुञ्जी शव्दहरूको लागि बोली लगाएँ जुन मेरो श्रोताले खोजिरहेका छन् वास्तवमा, मैले कम गुणवत्ता ट्राफिकलाई आकर्षित गर्नमा पैसा बर्बाद गर्न छोडेँ।”
किवर्ड पर्खिरहेका छन्
मान्छे को टन Google मा आफ्नो सेवा र उत्पादन को लागि खोज छन्। तिनीहरूले प्रयोग गर्दै कीवर्डहरू Unveil।
Clever Ads कुञ्जी शव्द योजनाकार नि: शुल्क उपकरणको बारेमा अधिक
भेट्ने क्रान्तिकारी सबै-मा-एक शब्द अनुसन्धान बजार र विज्ञापनदाताहरु लागि उपकरण। अब तपाईंको एसईओ रणनीति बढावा!
के हामी प्रस्ताव
सुविधा र हाम्रो मुख्य शब्द योजनाकार को लाभ
यस एसईओ उपकरणको साथ, तपाईले आफ्नो व्यवसाय (उत्पादन वा सेवाहरू) मा साँच्चिकै इच्छुक व्यक्तिहरूलाई सहि कुञ्जी शव्दचित्रहरूमा आकर्षित गर्नुहुनेछ जुन तपाईंको सम्भावित ग्राहकहरूले वास्तवमै गुगल खोजी पट्टीमा टाइप गरिरहेका छन्। Clever Ads Google Ads अभियान सफल हुनको लागि लामो पुच्छर कुञ्जी शब्दहरू उत्पादन गरेर प्रतिस्पर्धालाई प्रदर्शन गर्न डिजाइन गरिएको हो। एक राम्रो एसईओ रणनीति तपाईंको साइट राम्रो प्रदर्शनको लागि आवश्यक छ, र एसईओ राम्रो किवर्ड अनुसन्धान बिना केही पनि छैन। हामीलाई मद्दत गरौं!
तपाईंको व्यापार को लागि सही र लाभदायी परिणाम प्राप्त
हाम्रो खोजशब्द मुक्त पुस्ता उपकरण तपाईं आफ्नो खोज गर्न सम्बन्धित सबै सान्दर्भिक किवर्ड देखाउन र प्रमुख गुगल विज्ञापन मापन तिनीहरूलाई फिल्टर गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईं सचेत निर्णय र आफ्नो अभियान को लागि सबै भन्दा राम्रो प्रदर्शन किवर्ड चयन गर्न सही परिणाम प्राप्त गर्नेछौं। हुनुको साथै जानकारी र इच्छित समय हाम्रो उद्देश्य पुग्नु छैन सही परिणाम खराब प्रदर्शन गर्न नेतृत्व र, सक्नुहुन्छ फलस्वरूप भइरहेको, कुनै व्यवसाय मा मार्केटिङ निर्णय। हाम्रो खोजशब्द योजनाकार को खोजशब्द सूची तपाईंलाई यो समस्या छैन र यो पूर्ण मुक्त!
एक्सेल र जटिल स्पायर ads पानाहरूका बारे बिर्सनुहोस्
हामीलाई थाहा छ कि विशाल कागजातहरूमा डाटा ह्याण्डल गर्ने र विश्लेषण गर्दा तपाईंलाई थकित र दिक्क लाग्न सक्छ, साथै यसमा धेरै समय र संसाधनहरू खर्च गर्न आवश्यक पर्दछ, खराब नतीजाहरू। नडराउनुहोस्, हामी यहाँ मद्दत गर्न यहाँ छौं! समयहरू जब तपाइँले एक एक्स्प्रे स्प्रे ads पानामा धेरै कुञ्जी शव्दहरू डाउनलोड गर्नुपर्‍यो र त्यसमा फिल्टर गर्न र व्यवस्थित गर्न घण्टा काम गर्नु समाप्त भयो। Clever Ads कुञ्जीशब्द योजनाकार उपकरण को लागी धन्यवाद को लागी आसान छ। तपाईंको कीवर्ड सूचीहरू व्यवस्थित गर्नुहोस्, तिनीहरूलाई मर्ज गर्नुहोस्, तिनीहरूलाई विभाजन गर्नुहोस् वा तिनीहरूलाई हाम्रो उपकरणबाट सिधा पूरा गर्नुहोस्। सित्तैमा। कुनै सानो प्रिन्ट छैन। नडराउनुहोस्, हामी यहाँ मद्दत गर्न यहाँ छौं!
एसईओ र मार्केटिङ श्रेष्ठ अभ्यासहरू
सुरु र मान्छे मद्दत पाउन गर्नुहोस्
तपाईंको पीपीसी (प्रति-क्लिक) अभियान अनुकूलन र सान्दर्भिक किवर्ड आफ्नो ग्राहकहरु हेर्दै छन् र पहिले नै आफ्नो प्रतियोगिहरु लागि राम्रो काम लक्षित गरेर आफ्नो रय (प्रतिफलको लगानी) र बिक्री बढाउने। तपाईंको खोजशब्द अनुसन्धान कार्य गर्दा एक मौका सम्झना छैन।
Clever Ads हामी तपाईंलाई Google बाट मात्र नभई धेरै डाटा स्रोतहरूबाट कुञ्जी शब्दहरू लिएर निष्पक्ष जानकारी पनि प्रदान गर्दछौं। गुगल किवर्ड प्लानरको डाटा प्राय स्क्यु हुन्छ र हामीले हाम्रो किवर्ड जेनरेशन टूलको विकास गर्‍यौं जसले गर्दा तपाई अझ राम्रो खोजशब्द अनुसन्धान गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो भुक्तानी अधिग्रहण रणनीतिहरूको लागि चलाखीपूर्ण निर्णय लिन सक्नुहुन्छ।
तुरुन्तै विज्ञापन सुरु
Clever Ads कुञ्जीशब्द योजनाकार उपकरणको साथ तपाईं केवल एक ठाउँमा तपाईंको कुञ्जीशब्दहरू र कीवर्ड सूचीहरू प्रबन्ध गर्न सक्नुहुन्न यसलाई अझ सजिलो र सुविधाजनक बनाउँदै! Google Ads अभियान र विज्ञापन समूहहरु लाई तपाइँको Clever Ads खाताबाट सिधै अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ - सबै एक ठाउँमा। समय पैसा हो र हामी तपाईलाई दुबै बचाउन चाहन्छौं हाम्रो अत्याधिक किवर्ड उपकरण प्रयोग गरेर।
खोजशब्द अनुकूलन पर्छ-के
, स्टप किवर्ड किनभने तिनीहरूले तपाईंको व्यापार चासोको विषय छैन, र नयाँ किवर्ड आफ्नो अभियान को प्रदर्शन वृद्धि सक्छ परीक्षण underperforming छन् एसईओ सर्वश्रेष्ठ अभ्यास टिप तपाईं समय समयमा आफ्नो विकास गर्न अनुकूल गर्न तपाईँको किवर्डहरू को प्रदर्शन जाँच गर्नुपर्छ भन्ने छ भनेर नबिर्सनुहोस्। सधैं खोजशब्द रुझान मा एक आँखा राख्न! खोजशब्द परीक्षण महत्वपूर्ण छ र हामी निश्चित underperforming किवर्ड मा अनावश्यक पैसा खर्च नगर्न आफ्नो कीवर्ड सम्झाउने हुनेछु। हाम्रो खोजशब्द योजनाकार तपाईंलाई छुटाउन छैन।
के हामीलाई फरक बनाउँछ
स्वागत छ खोजशब्द अनुसन्धान र एसईओ सटीक भविष्य गर्न
Google Ads अभियानहरू बनाउन र अनुकूलन गर्ने हाम्रो अनुभवले हामीलाई तपाईंको व्यवसायको लागि सान्दर्भिक कुञ्जी शब्द छनौट गर्दा तपाईंको लागि वास्तवमा के महत्त्वपूर्ण छ भनेर जान्न मद्दत गर्दछ। हामीलाई थाहा छ तपाईंलाई के चाहिन्छ! Clever Ads कुञ्जीशब्द योजनाकारको साथ, कुञ्जीशब्द अनुसन्धान धेरै छिटो र सजिलो हुनेछ, र तपाईं जहिले पनी आउँन सक्नुहुन्छ आफ्नो कुञ्जी सूची सुची अपडेट र प्रबन्ध गर्न। तपाईंको SEO ले एक सुधारको अनुभव लिनेछ, र त्यस्तै तपाईंको व्यापार लक्ष्यहरू पनि।
यसका साथै हामी चाहन्छौं कि तपाईले यस प्रक्रियामा जान्न चाहानुहुन्छ, र प्रिमियर गुगल पार्टनरहरूको रूपमा हामीले तपाईंको फिर्ता पाएका छौं र तपाईंले हाम्रो विशेषज्ञताबाट अधिकतम फाइदा लिने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। तपाईले खोजशब्द र एसईओ उपकरण फेला पार्नुहुने छैन, तर अपराधमा साझेदार, जसले तपाईलाई खोजिरहनु भएको किवर्डहरू मात्र प्रदान गर्दैन, तर तपाई आफैंमा Google Ads तपाईंको व्यवसायले भिन्नता याद गर्नेछ!
सबै-मा-एक शब्द योजनाकार
तपाइँको खोजशब्द अनुसन्धान आचरणबाट सुरू गर्न समाप्त गर्नुहोस् तपाइँको Clever Ads ड्यासबोर्डलाई नछोडी यो यत्तिको सजिलो छ! Google Ads अभियानहरूमा तपाईंको छनौटको कुञ्जीशब्द सल्लाहहरू समावेश गर्न कुञ्जी शब्द वा यूआरएल प्रविष्ट गर्नबाट (तपाईंको प्रतिस्पर्धीहरूको प्रदर्शन गर्ने कुञ्जी शब्दहरू जालसाजी छल नगर्दै! यो केवल अर्को चाल हो!)। उपकरणहरू वा नियन्त्रण प्यानलहरू परिवर्तन बिना नै सबै उहि स्थानबाट। र यो नि: शुल्क हो! तपाईं निर्णय!
सँगै हामी बलिया छौं
Clever Ads कुञ्जीशब्द उत्पादन उपकरण प्रयोग गरेर हाम्रो अन्य उपकरणहरू, जुन तपाईं हाम्रो गृहपृष्ठमा फेला पार्न सक्नुहुनेछ, तपाईंको Google Ads परिणामहरूलाई अधिकतम पार्छ र तपाईंको समर्पण र बजेट अनुकूलन गर्दछ। तपाईंको बिक्री र परिणामहरू द्रुत रूपमा सुधार हुनेछ ... किन तपाईको कुञ्जी शब्दहरू मात्र सुधार गर्नुहोस् जब तपाईं हाम्रो मुक्त Google Ads Audit साथ सम्पूर्ण अभियानहरू पुनर्भ्यास गर्न सक्नुहुनेछ जसले आश्चर्यजनक विज्ञापनहरू र Google Ads अभियानहरू सिर्जना गर्दछ? तपाईका सबै Google Ads रणनीतिहरू एकै स्थानबाट Clever Ads साथ रोकिनुहोस्। हाम्रो अन्य उपकरणहरूका बीच तपाईले केवल लेखा परीक्षण र कुञ्जीशब्द योजनाकार मात्र पाउन सक्नुहुन्न, बरु एक अभियान क्रिएटर, तपाईको प्रदर्शन अभियानहरूको लागि ब्यानर क्रिएटर, एक मोबाइल अनुप्रयोग जहाँ तपाई आफ्नो सबै मेट्रिक्स हेर्न र विश्लेषण गर्न सक्नुहुनेछ, र Slack , Microsoft Teams वा Google Chat । ती सबै पत्ता लगाउनुहोस् र तपाईंको गुगल विज्ञापन अभियानहरू रोक्नुहोस्!
पहिलो कुरा पहिलो: हामी आफ्नो फिर्ता भयो
हामी तपाईको Google Ads खातामा तपाईको कुञ्जीशब्द सूची सिर्जना गर्नका लागि साइन इन गर्न हामी तपाईलाई सोध्नेछौं, यस तरीकाले तपाईलाई सँधै पनी आउँनेछ र तपाईको खोजशब्द अनुसन्धान सूची प्रबन्ध गर्न सक्नुहुन्छ। हामी डाटा गोपनीयतालाई गम्भीर रूपमा लिन्छौं र केवल तपाईंलाई सकेसम्म उत्तम अनुभव प्रदान गर्न हामी चाहिएको चीजहरू संकलन गर्दछौं।